Iindlela ezili-10 zeNtengiso eziShukumayo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 27, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Xa uthetha ngentengiso ephathekayo, ndicinga ukuba phantse wonke umthengisi ufumana umfanekiso owahlukileyo wokuba loluphi uhlobo lwesicwangciso othetha ngaso. Namhlanje sigqibile iseshoni yoqeqesho yeselfowuni eneenkampani ezimalunga nama-50 ezikhoyo. Njengoko Ukubonisana neMarlinspike usebenze nathi kwisilabhasi yoqeqesho, kuye kwacaca ukuba kuninzi kakhulu kwintengiso yeselfowuni kunokuba umntu enokucinga.
Nazi iindlela ezili-10 zokuThengisa eziSelfowuni onokucinga ngazo:
Voice -Ngandlela thile, le ihlala ishiyeka ngaphandle :). Nokuba uqhagamshela nje inombolo yefowuni kwindawo yakho, okanye ukuphuhlisa isicwangciso esibanzi sokuhamba kunye nesisombululo ngokusebenzisa izixhobo zoopopayi ezinje Twilio, Ukwenza inkampani yakho ibelula ukuyitsalela umnxeba kunye nokufumana ulwazi oludingayo ngamathemba okunyusa ukuguqulwa kweemethrikhi.
i-SMS - Iinkonzo zemiyalezo emifutshane, okanye ukuthumela imiyalezo, isenokungabi bobona buchwephesha bokwabelana ngesondo emhlabeni, kodwa iinkampani ezisebenzisa ubuchwepheshe bokuthumela imiyalezo ziyaqhubeka nokubona ukukhula nokwamkelwa. Ayisiyonto yolutsha nje… uninzi lwethu lubhala imiyalezo emininzi kakhulu kunangaphambili.
Iintengiso eziSelfowuni - ezi ayizizo iintengiso zebhanile yakudala. Iqonga lanamhlanje lentengiso yeselfowuni lityhala iintengiso ngokubhekisele kukuhambelana, indawo kunye nexesha… okwenza ukuba kube lula ukuba intengiso yakho ibonwe ngumntu olungileyo, kwindawo elungileyo kwaye ngexesha elifanelekileyo.
Iikhowudi zeQR - oh indlela endikuthiya ngayo… kodwa zisasebenza. Iifowuni zikaMicrosoft ziwafunda ngaphandle kokusebenzisa usetyenziso kwaye amashishini amaninzi abona amaxabiso amahle kakhulu okuhlawulwa-ngakumbi xa kutyhala umntu ukusuka kuprinta ukuya kwi-Intanethi. Sukugxotha okwangoku.
Ifowuni ye-imeyile - iirhafu ezivulekileyo ze-imeyile ugqithile kwiirhafu ezivulekileyo zedesktop kodwa i-imeyile yakho iseyilo lencwadi oyithengileyo kwiminyaka emi-5 eyadlulayo kwaye awukwazi ukufunda ngokulula kwisixhobo esiphathwayo. Ingaba ulunde ntoni?
Ifowuni yeWebhu -Kuba indawo yakho ayilungelanga, unokuhambisa nasiphi na esinye sezixhobo zokwenza ifayile yakho indawo ephathekayo. Akukho namnye kubo ogqibeleleyo, kodwa benza umsebenzi ngokungcono kunanto. Jonga amaxabiso akho okubhabha okuhambayo ukuze ubone ukugcwala kwabantu.
Urhwebo ngeSelfowuni (mCommerce) -kuba kukuthenga ngomyalezo obhaliweyo, usetyenziso lweselfowuni, okanye ukuphunyezwa okuzayo kwe kufutshane nonxibelelwano lwentsimiAbantu benza izigqibo zokuthenga kwizixhobo zabo eziphathwayo. Ngaba banokuthenga kwizinto zakho?
Iinkonzo zendawo -Ukuba uyazi ukuba undwendwe lwakho luphi, kutheni ungamxeleli? Indawo ezisekwe kwiwebhu okanye ii -apps zeselfowuni zingenza kube lula kubathengi bakho ukuba bakufumane kwaye bafike kuwe.
Izicelo zefowuni - Bendingathembanga kwaphela malunga neeapps zeselfowuni kuqala… bendicinga ukuba isikhangeli sewebhu esiselfowuni siza kuthatha indawo. Kodwa abantu bayazithanda iiapps zabo, kwaye bayathanda ukuphanda, ukufumana, kunye nokuthenga kwiimpawu ezenza ishishini ngazo. Sebenzisa isicelo esinyanzelayo, iinkonzo zendawo kunye nemithombo yeendaba zentlalo ngaphezulu kweapp yakho yeselfowuni kwaye uya kubona amanani enyuka. Qiniseka ukufaka i-SDK kwindawo oyithandayo kubahlalutyi iqonga lokufumana ukuqonda okufunayo!
amacwecwe - kulungile, andiyithandi into yokuba babe neepilisi ngaphakathi ngeselula nokuba… kodwa ngenxa yeapps kunye neebrawuza, ndicinga ukuba zahlukile. Ngokukhula okumangalisayo kwe-iPad, i-Kindle, i-Nook kunye ne-Microsoft Surface ezayo, iitafile ziya kuba isikrini sesibini abantu basebenzisa ukubukela umabonwakude okanye ukufunda kwigumbi lokuhlambela (eww). Ukuba awunaswipe usetyenziso lwepilisi (Njengabaxhasi bethu iZmags) ethatha ithuba ngamava awodwa omsebenzisi anokubonelelwa yithebhulethi, uyaphoswa.
Uninzi lweenkampani alucingi ukuba iimveliso okanye iinkonzo zazo ziyanyanzelisa ngokwaneleyo ukuba zisebenzise isicwangciso esilijikelezileyo. Ndiza kubonelela ngomzekelo omhle wenkampani ene-mobile app engummangaliso kwishishini onokucinga ngalo… Behr. Behr sele uthumele i Isicelo seMbalaSmart esiphathwayo ekuvumela ukuba ujonge indibaniselwano yombala, utshatise umbala usebenzisa ifowuni yakho yekhamera, fumana ivenkile ekufuphi yokuthenga kuyo… kunye nokhetho olukhulu lokudibanisa imibala kunye neengcebiso.
tags: Iinkonzo zendawousetyenziso lweselulaurhwebo mobileiindlela zokuthengisa ezihambayoiwebhu yentengiso yeselfowuniinkqubo emfutshane yomyalezoi-SMSimiyalezo ebhaliweyoilizwingokuzenzekelayo ngezwi
Amanyathelo okwenza iphepha likaFacebook